Kuongorora kurara kwakaburitswa mune skrini yeApple Watch | Ndinobva mac
Kuona kurara kwakaburitswa muApple Watch skrini
Tinogona kutaura kuti isu tiri padyo nekuzvarwa kuva nechimwe cheanotarisirwa mabasa nevashandisi izvo Vanorara neApple wachi pawrist yavo Uye kune zvakawanda - kusanganisira ini - vanorara vasina Apple mudziyo.
Mune ino kesi, yepamutemo skrini yeApple Watch Series 5 neiri basa rinodaidzwa kuti "kurota" rinoburitsa zviri pamutemo kuti Cupertino firm iri kushanda pairi. Zvese zvinoratidza kuti iro basa nyowani rinosanganisirwa mune inotevera vhezheni yeiyo OS OS uye inogona kuve dzora maawa atinorara natively pasina chikonzero chechitatu-bato kunyorera.
Apple inonzi yakaibvisa paminiti yekupedzisira kubva pane yakakosha yekupedzisira
Ichokwadi kuti chirevo chakakosha chaGunyana apfuura chaive chipfupi pane zvatajaira kuona nguva pfupi yadarika, asi izvi hazvireve zvakawanda kunze kwevamwe vashandisi uye vezvenhau vanoomerera vachiti siginecha yeapuro yakarumwa yakabviswa munguva yekupedzisira kuratidza ichi chikamu icho yakaratidza iyo Apple Watch Series 5 neayo yega yekurara chiyero app. Ichi chinhu chakataurwa kwenguva yakareba uye chisina kunyatso kusimbiswa zviri pamutemo.
Iye zvino zvinoita sekunge basa iri rakabatanidzwa zvizere musystem uye isu tinogona kuriona nekukasira mune software yekuvandudza iyo yatinotarisira kuti ichave yeese Apple Watch mamodheru uye kwete chete yeiyo Series 5. Mune chero mamiriro ezvinhu iyo Capture inoratidzwa zviri pamutemo se yakataurwa zvakanaka pakati 9To5Mac kune Apple pachayo uye mairi unogona kuonar iwo mubhedha mashandiro eawa neano novel system iyo inogona kupa iri basa kuyera kurara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kuona kurara kwakaburitswa muApple Watch skrini
Apple inoratidza maminetsi gumi nemashanu ekutanga Evanhu Vese akateedzana kuNew York Comic Con
Aurora HDR mune vhezheni 2018 ndeye mahara kwenguva yakati rebei